(ဧကရာဇ် ဂေါင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ Patricia Buckley Ebrey (2003). /books?id=oJbpoEwvQzcC&pg=PA171&dq=huangdi+family+tree#v=onepage&q&f=false Women and the family in Chinese history, illustrated Volume2of Critical Asian scholarship, Psychology Press. ISBN 0-415-28823-1။ 4-01-2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fabrizio Pregadio (2008). in Fabrizio Pregadio: /books?id=MioRmEq2xHUC&pg=PA505&dq=huangdi+family+tree#v=onepage&q=huangdi%20family%20tree&f=false The encyclopedia of Taoism, Volume 1, ill ustrated, Psychology Press. ISBN 0-7007-1200-3။ 4-01-2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chi-yen Ch'en (14 July 2014). Hsun Yueh and the Mind of Late Han China: A Translation of the SHEN-CHIEN. Princeton University Press, 171–. ISBN 978-1-4008-5348-9။
↑ (တရုတ်) 大风歌
↑ John Minford (2000). in Minford, John: An Anthology of Translations Classical Chinese Literature Volume I: From Antiquity To The Tang Dynasty. Columbia University Press, 415. ISBN 978-0-231-09676-8။
New title ဟန်ဘုရင်
ဟန်မင်းဆက် ၏ ဧကရာဇ်များ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟန်_ဧကရာဇ်_ကောင်းကျူ&oldid=519680" မှ ရယူရန်
၃ ရာစု ဘီစီ မွေးဖွားမှုများ
၁၉၅ ဘီစီ သေဆုံးမှုများ
၂ ရာစု တရုတ်ပြည်
၃ ရာစု တရုတ်ပြည်
ဟန် မင်းဆက် ပုဂ္ဂိုလ်များ
၃ ရာစု ဘီစီ တရုတ် အုပ်စိုးသူများ
၂ ရာစု ဘီစီ တရုတ် အုပ်စိုးသူများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၇:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။